Home Somali News USA:Maraykanka oo ku hanjabay inuu ka baxayo wadahadalka Iran!
Dowlada Maraykanka way isaga bixi doontaa wadahadalada Iran ee Nukliyeerka hadii ay sii jiitamaan, waxaa sidaa lagu yiri Warsaxaafadeed shalay gelinkii danbe kasoo baxay Aqalka Cad ee laga xukumo Maraykanka.
Warsaxaafadeedkan ayaa kusoo beegmay xili la dhaafay wakhtigii loo qabtay in heshiis laga soo saaro wadahadalada ku aadan barnaamijka Nukliyeerka ee Iran, wakhtigaasi oo ku ekaa 31kii Maarso.
Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay inuu illaa iyo saaka oo Khamiis ah sii joogi doono magaalada Lausanne oo ay shirarka ka socdaan, si uu isugu dayo inuu xal ka gaaro qodobada weli la isu heysto.
Dowlada Iran ayaa weli diidan inay ka tanaasusho joojinta barnaamijkeeda, isla markaana ku doodeysa in laga qaado cunaqabateynta dhaqaalaha ee saaran.
Dhinaca reer Galbeedka ayaa iyaguna ku doonaya in barnaamijka Nukliyeerka gebi ahaan la joojiyo, isla markaana lala wareego uraniyumka ay dowlada Iran kobcisay, markaas in sanado kadib la qaadayo cunqabateynta saaran.
Ethiopia: Madaxweyne Farmaajo oo Waraaqaha Aqoonsiga Ka Guddoomay Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya